Wararkii ugu dambeeyay weerarka ku wajahan Magaalada Guriceel | Dhacdo
Home Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeyay weerarka ku wajahan Magaalada Guriceel
Ciidamada Dowladda oo gacan ka helaya kuwa Galmudug iyo Xoogaga Ahlu Sunna oo dhinaca kale ah ayaa dhadhaqaaqyo iska soo horjeeda ka wada Gobolka Galgaduud.
Ciidamada Dowladda iyo kuwa Galmudug oo ka dhaqaaqay deegaanka Ceeldheere ayaa la soo sheegaya inay ku sii siqayaan Magaalada Guriceel. Labada ciidan ayaana caawa ku sugan halka lagu magacaabo Tuulo Sadiiq, oo ku taala inta u dhaxeyso Ceeldheere iyo Guriceel.
Wariye-yaasha ayaa soo sheegaya in ciidamada ay waddada ugu safrayaan, si taxadar badan laga arki karo, maadaama goobahaasi ka ag-dhow yihiin dagaal-yahanada u daacadda ah Ahlu Sunna, mar kastana ay suurtagal tahay in dagaal uu ka dhex qarxo.
Sidoo kale Xoogaga Ahlu Sunna oo wata gaadiidka dagaalka ayaa maanta socod ku maray wadooyinka iyo xaafadaha Magaalada Guriceel. Ciidamada waxaa magaalada loogu arkaya si ka duwan, maalmihii la soo dhaafay.
Xoogaga Ahlu Sunna ayaa gelinkii dambe ee maanta bar kontorool ka sameystay waddada looga leexdo Garoonka Diyaaradaha Guriceel, halkaasoo ay ku baarayaan gaadiidka ka imaanaya Magaalada Dhuusamareeb.
Dhanka kale Cabdullaahi Cabdi Raage oo ka mid ah Saraakiisha Xoogaga Ahlu Sunna ayaa goor dhow ku dhaawacmay shir gaari, oo uu ku galay miyiga Koonfurta Guriceel.
Previous articleDilka Xildhibaan David Amess oo baqdin ku keenay Soomaalida Ingiriiska
Next articleHSF oo $100,000 ugu deeqday abaaraha ka jira Gobolada J/hoose iyo Gedo